Shiinaha API610 BB4 (RMD) Soo saarayaasha iyo badeecada Bamgaarka | bame damei kingmech
Cabbirka: 4-10 inji
Awoodda: 100-580 m3 / h
Heerkulka: 0-210 ° C
1. Xakamaynta nuugista, shaashadda dheecaanka, faafiyaha, iyo kiciyaha: birta kaarboon ee birta chrome.
2. Shaft, giraan giraanta iyo baadiyaha faafiya: birta aluminium ee birta chromic.
1. Bambooyinku waa qasnado qayb ahaan ah, mashiinno heerar kala duwan ah. Xakamaynta nuugista, kaashka masraxa iyo kaashka dheecaanka si adag ayaa loo wada qabtaa balkaha. Kala-goysyada u dhexeeya sanduuqan ayaa ugu horreyn lagu xiray iyadoo la adeegsanayo xiriir biraha-bir ah. Simultancously, o-ring ayaa loo isticmaalaa sidii shaabad kaabayaal.
2. Qaybaha been-abuurka ah waxaa loo isticmaalaa nuugista, masraxa iyo dheecaannada ka soo baxa noocyada bambooyinnada kuleyliyaha ee kuleyliyaha ee MSHB.
Daloolinta usheeda dhexe
1. Fallaagada bambooyinkan waxaa lagu xiray biyo jilicsan iyo qaboojin. Aagga mashiinka daboolka, mashiinka mashiinka waxaa lagu ilaaliyaa gacmo la cusboonaysiin karo.
Dhalista iyo qalabka isku dheelitirka axial
2. Golaha wareejinta waxaa lagu taageeraa isdabamarinta xargaha labada dhinac ee mashiinka mashiinka. Dhalista bambooyinku waa lagu qasbay saliid. Nidaamka saliida waxaa lagu qalabeeyaa nooca DG pump. Xakamaynta foosha ee rotor osis oo lagu dheellitiray dheelitirka dheelitirka. Iyo riixitaanka riixitaanka waa laso oo la siiyay kaas oo lagu xakameynayo inuu qaado awood gees ah oo ka timaada isbedelka xaaladaha shaqada.
1. Bamka waxaa si toos ah u kaxeeya mootada iyada oo la isku xidhayo. Qalabka, isku xirka xuubka iyo isku xidhka Haydaroolka ayaa loo isticmaali karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macmiilka. Mashiinka waxaa lagu wadi karaa matoorka mashiinka.
2. Jihada wareegaya ee bambooyinku waa kuwo saacad u dhow marka la eego dhinaca darawalka.
3. Nooca bambooyin quudinta kuleyliyaha sare ee MSH waxaa loo isticmaalaa quudinta kuleeliyaha cadaadiska sare ee tuuraya biyo nadiif ah oo cadaadis sarreeya leh.
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay soosaarida biyaha warshadaha
Hore: API610 BB3 (AMD) saar
Xiga: API610 BB5 (DRM) saar
API610 VS1 saar VTD Model